Sogang University - Dzidza Kune mu South Korea. magazini Student
inotangwa : 1960
Musakanganwa kuti kurukura Sogang University
Kunyoresa pa Sogang University
Sogang University yakavhurwa neDare Society Jesu kudzidzisa yakavakirwa Catholic zvitendero uye rakafuridzirwa wechechi yeRoma uzivi dzidzo, zvinoenderana yeKorea tsika dzidzo.
Sogang University anokanda dzidzo yose munhu ane rudo uye nokutenda, kuremekedza tsika pamusoro pfungwa kuremekedzwa kwevanhu uye kukurudzira kuti pakutsvaga nokutsvaka kudzidza pamwe nemwoyo mukutsvaka chokwadi. Kuburikidza dzidzo ichi, kudzidzisa matarenda ndiani vanozvipira kukura ane humanistic nemagariro uye vemunharaunda.
Sogang University, ive sangano dzidzo pasi kutungamirirwa Society kwaJesu, kutevera tsika dzayo kuti kwairatidzwa wechechi yeRoma mumayunivhesiti munyika yose pamusoro rokupedzisira 460 makore, ndehwokuti kupa dzidzo kuti anodzidzisa kunamata Mwari uye anonzwisisa zvinoreva upenyu kwechokwadi.
The yekudzidzisa pana Sogang University ndehwokuti kuumba vakadzidza vane zvedzidzo kunaka zvinhu uye, pakutevera wechechi yeRoma tsika kuti yave kutevera Qualitative neunyanzvi dzidzo.
Sogang University ndehwokuti kudzidzisa vagari pamwe hunoshamisa utungamiri nemano, ndiani anogona kubatsira vanhu uye rudzi nemafungiro kuzvipira, pfungwa basa, akura uye Integrated vatambi. Uyewo dzidzisa cosmopolitans vechokwadi vanogona kukonzera National kubudirira uye nyika rugare nokunzwisisa kuitika kuchinja nyika nguva dzose, uye wokubvuma kuchinja dzinonetsa nokutonga.
Chikoro Humanities uye International Netsika
Korean Language uye Literature
European Languages ​​uye Netsika
Chirungu Literature & zvemutauro
Sogang Business School (Rokutenderwa Program)
Global Korean Studies (Studies Korean mu Chirungu)
Chemical uye BioMolecular Engineering
Computer Science uye Engineering
Department of anorapa achishandisa mitemo Engineering
Muyambo (Political Science, Economics uye Philosophy)
Development of Korea uye International Cooperation Development
Kuvambwa Vanababa zita koreji “Sogang” (kumavirira Han River). The bumbiro nokuti Sogang College akapiwa neShumiro Education. In February 1960 Fr. Kenneth E. Killoren, S.J. paakagadzwa sapurezidhendi wokutanga. Sogang College akazarura mikova dzaro madhipatimendi nhanhatu: Economics, Chirungu Language uye Literature, History, masvomhu, Uzivi uye Physics. Kupererwa ne 600 vamhan'ari 166 vakanga vakabvuma sezvo kirasi yokutanga. Classes hwakatanga 18 Kubvumbi 1960, chete zuva rimwe pamberi April Revolution.
In December 1969 mugwaro racho yunivhesiti Chakabvumirwa neDare reBazi Redzidzo uye Sogang College akava Sogang University. The University raiva College of Arts uye Science pamwe madhipatimendi nhanhatu, College of Science uye Engineering pamwe madhipatimendi shanu uye College of Commerce pamwe madhipatimendi matatu .
On March 2, 1970, Pakutsaurirwa uye wenyika kugadzwa dzakaitwa pana Mary Hall. Fr. John P. Daly, S.J., akatora hofisi sapurezidhendi wokutanga. Akataura “Education Based pamusoro Chokutenda uye Reason”. On April 7, 1970, South Korean President Park Chung-hee zvakapa mabhazi maviri rubatsiro chokufambisa fakaroti uye mudonzvo, asi ivo akazosangana kutengeswa nokuti management matambudziko. Upenyu somunhu yunivhesiti izere yaireva zvakawanda vadzidzi uye raibhurari, yakanga yatamira Ricci Hall, aida pachake chivakwa kwayo. Kuvaka Loyola Library kuchamhembe dzesango mitambo akatora zvose 1973. Zvakanga kwazvo pakachena-zvekuvaka wokutanga raibhurari South Korea raMwari.
The kembasi mutambo yaiitwa gore negore yakatsigira mudzidzi yokubatana. kubva 1969 yava zvaisanganisira dzakatevedzana zvedzidzo dzokusiyirana.
Yakakwirira pfungwa yechi30 gore mhemberero yaiva pachena kuti chifananidzo uchimirira albatross ichikwira nemapapiro ayo makuru chena. The Alumni Association akapa chifananidzo imwe April 17 pachena mhemberero. Sogang chitarisiko akanga mberi hwakavandudzika panguva kuma1990 gedhi machena pamberi, kubudikidza albatross chifananidzo. The duku nhandare Yakazopiwa zita rokuti Cheongnyeon Gwanjang (Youth Square) uye akapiwa neater Kutarira. Sezvo zvivako zvitsva dzakavakwa paiva kuperevedza kupaka nzvimbo, saka zvizhinji yakavakwa pasi albatross Square uye muna November 1997 Danho zvivako nokuti tsika zviitiko zvakavakwa pamusoro mijenya.
Unoda kurukura Sogang University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Sogang University musi Map
Photos: Sogang University pamutemo Facebook
Sogang University wongororo
Join kukurukura pamusoro Sogang University.